Nyamavhuvhu 16, 2018 arun
Pantera Capital anomutsa $ 71M nokuda crypto asingashumbi Fund
Blockchain mubhizimisi kambani Pantera Capital wakatanga kurwisa wayo wechitatu crypto Fund pamwe pamusoro $71 miriyoni atoita. An SEC pakunamata kunoratidza itsva inivhesitimendi vanoronga, akadana Venture Fund III, akatanga nechipiriso chacho yekutanga July yechi31 uye wakamutsa $71.44 miriyoni kubva 90 vanoita.
Pantera uyewo akanyora Blog mumhanyi neChitatu kuti Venture Fund III akatoita wayo wokutanga blockchain bheji, bhizimisi mu Bakkt - a cryptocurrency zvokutengeserana papuratifomu raparurwa mangwanani ichi mwedzi neaizi, mubereki boka New York Stock Exchange. Pantera mari makasimba akanyora 10,000 muzana kudzokera pamusoro mashanu adarika kubvira mbambo dzaro dzakasiyana cryptocurrency muzvirongwa. Pantera akaita paakapiwa mu crypto exchanges akadai Bitstamp, Korbit uye Shapeshift, uyewo vachibhadhara startups akafanana Circle.
South Korea zvemari $ 880M kuti Tech kusanganisira blockchain
Kim Dong-yeon, South Korea kuti gurukota rezvemari, akazivisa kuti hurumende vanotsaura $4.4 bhiriyoni mumakore kuuya kuti chirongwa mari iyo chinotarisa blockchain uye dzimwe burgeoning Tech sectors pfumbamwe. zvakananga, hurumende South Korea achaita mari pamusoro $880 miriyoni gore rinouya kuitira kuti vavandudze unyanzvi itsva ruzivo kusanganisira blockchain.
Data akadura pamusoro Website of Bazi Economy uye Finance inoratidza kuti hurumende iri kuisa kuti govera 1 tiririyoni Won, kana pamusoro $880 mamiriyoni 2019 - ane 80 muzana kukura zvichienzaniswa kuti 2018 - mari mu ruzivo kusanganisira blockchain, mashoko makuru uye AI. Uyezve, simba akati zvichaita mari inosvika $8 – 9 bhiriyoni munzvimbo iri kuuya namakore mashanu. Chinangwa ndechokuti “kufunga kusimudzira guru mashoko uye AI, dzichiri blockchain Michina kuitira umboo utariri kuchengeteka uye boosting kugovana upfumi.”
Cryptocurrency Exchange ZB anoronga kutamira Marita
ZB.com, enyika fith pakukura cryptocurrency Exchange ne zuva zvokutengeserana vhoriyamu, ari akamumutsira chitoro pamusoro jeka Blockchain Island cheMarita. ZB.com zvichaparadzwa pamutemo yokumisa remapazi ayo European pamwe pakuparurwa munhu angatsinhananisa idzva Marita. Izvi ichangoburwa chiziviso kunotevera avo kubudikidza Binance, OKEx uye DQR, avo uyewo akazarura mahofisi pachitsuwa.
Kambani zvichaita pakutanga Kutanga ave crypto-kuti-crypto Exchange uye pakupedzisira kutarira kupa Fiat-kuti-crypto zvokutengeserana maviri kuburikidza kwayo pachikuva itsva inobva parudzi urwo chitsuwa European. Co-muvambi Jimmy Zhao akati "zvichida Marita ndiye munyika dzakawanda mberi uye mberi-kufunga rudzi DLT, crypto uye fintech, uye isu tiri kufara kwazvo kuti kuva chikamu Blockchain Island. Tinovimba tichakwanisa kuzivisa akavhiyiwa dzedu mhenyu nokukurumidza.”